Andrew Johnson Biography - Filoham-pirenena faha-fito ambin'ny folo
History & Culture Filoha Amerikana
Andrew Johnson - Filohan'ny fahafito ambin'ny folon'ny Etazonia
Andrew Johnson's Childhood and Education:
Teraka tamin'ny 29 Desambra 1808 tao Raleigh, Caroline Avaratra. Maty ny rainy rehefa feno telo taona i Johnson ary natsangana tamin'ny fahantrana. Izy sy i William rahalahiny dia voaroaka ho toy ny mpanompo tsy nahazoana alalana tamin'ny fametahana azy. Noho izany dia samy niasa ho an'ny sakafony sy ny fialany izy ireo. Tamin'ny 1824, samy nandositra avokoa izy ireo ary nandrava ny fifanarahana. Niasa tamin'ny varotra maoderina izy mba hahazoana vola.
Tsy nanatrika sekoly mihitsy i Johnson. Nampianatra ny tenany hamaky teny kosa izy.
Johnson dia zanak'i Jakôba, mpiantafika mpiandry varavarana, ary sexton tao Raleigh, Caroline Avaratra ary Mary "Polly" McDonough. Maty i Dada rehefa telo taona i Andrew. Taorian'ny nahafatesany dia nanambady an'i Turner Dougherty i Mary. Nanana rahalahy iray atao hoe William i Johnson.
Tamin'ny 17 May 1827, i Johnson dia nanambady an'i Eliza McCardle tamin'izy 18 taona ary 16 taona izy. Nianatra azy izy mba hanampy azy hanatsara ny fahaizany mamaky sy manoratra. Samy nanana zanakalahy telo sy zanakavavy anankiroa ry zareo.
Andrew Johnson's Career Before the Presidency:
Tamin'ny fito ambin 'ny folo, i Johnson dia nanokatra ny fivarotany manokana tao Greenville, Tennessee. Nandritra ny 22 taona dia voafidy ho Ben'ny tanànan'i Greenville i Johnson (1830-33). Nanompo tao amin'ny tranon'ny solontenan'i Tennessee (1835-37, 1839-41) izy. Tamin'ny taona 1841 dia voafidy ho Senatera ao Tennessee izy. Tamin'ny 1843-53 izy no solontenan'ny US. Tamin'ny 1853-57 dia lasa governoran'i Tennessee izy.
Johnson dia voafidy tamin'ny 1857 ho Senatera Amerikana misolo tena an'i Tennessee. Tamin'ny 1862, i Abraham Lincoln dia nanao an'i Johnson, governoran'ny tafika tao Tennessee.
Tonga ny filoha:
Rehefa nihazakazaka ny fifidianana tamin'ny taona 1864 ny Filoha Lincoln , dia nifidy an'i Johnson ho Filoha lefitra izy . Natao izany mba hanamaivanana ny tapakila amin'ny soutnerner izay tonga mpomba ny mpanohana.
Johnson dia lasa filohan ' ny fahafatesan'i Abraham Lincoln tamin'ny 15 Aprily 1865.
Fihaonam-pahaizana sy fahatomombanan'ny filohan'i Andrew Johnson:
Rehefa tapitra ny filoham-pirenena dia niezaka ny hanohy ny fahitana an'i Lincoln mikasika ny fanarenana indray ny Filoha Johnson. I Lincoln sy i Johnson dia samy nahatsapa fa zava-dehibe ny ho mendri-piderana sy hamela ireo izay navotsotra avy amin'ny firaisana. Ny drafitra fanarenana an'i Johnson dia nanome alalana ireo sambo nianiana ny fianianana tamin'ny governemanta federaly mba hamerenana ny zom-pirenena. Io, miaraka amin'ny famerenana haingam-pahefana haingana ho an'ireo firenena, dia tsy nahazo vintana velively satria ny Atsimo dia tsy naniry ny hanitatra ny zo hifidy ny mainty hoditra ary ny Radical Republicans dia naniry ny hanasazy ny Atsimo.
Rehefa nandany ny lalàna momba ny zon'ny sivily tamin'ny 1866 ny Repoblika Radikaly , dia nanandrana nametaveta ny volavolan-dalàna i Johnson. Tsy nino izy fa ny avaratra dia tokony hanery ny fomba fijeriny any atsimo saingy mamela ny atsimo hamaritra ny lalany. Ny votoatiny momba izany sy ny faktiora 15 hafa dia navotsotra. Ny ankamaroan'ny fotsy hoditra manohitra ny fanarenana.
Tamin'ny taona 1867, novidina ho any amin'ny antsoina hoe "Seward's Folly" i Alaska. Nividy ny tany avy any Rosia ho an'ny 7,2 tapitrisa dolara amerikana i Etazonia noho ny torohevitry ny Sekreteram-panjakana William Seward .
Na dia maro aza no nahatsikaritra izany ho toy ny hadalana tamin'io fotoana io, dia tena fientanam-po mahavariana tokoa ny nanomezana an'i Amerika miaraka amin'ny volamena sy ny solika raha toa ka mampitombo ny haben'ny Etazonia manerana an'i Etazonia ary manala ny fitaratry ny Rosiana avy amin'ny kaontinanta Amerikana Avaratra.
Tamin'ny taona 1868, ny tranon'ny Antenimiera dia nisafidy ny hanohana ny filoha Andrew Johnson noho ny fandroahana ny sekreteran'ny ady an-trano Stanton manohitra ny làlan'ny Lalàna momba ny Lalàna ao amin'ny birao tamin'ny 1867. Izy no filoha voalohany nogadraina nandritra ny birao. Ny filoha faharoa dia i Bill Clinton . Raha vao mitandrina dia mila mandatsa-bato ny Sénat mba hanapa-kevitra raha tokony hesorina amin'ny birao ny filoha. Nifidy ny hanala an'i Johnson amin'ny vato tokana ny Senat.
Tamin'ny 1868, tsy voatendry hanolo-tena i Johnson.
Niala tao Greeneville, Tennessee izy. Niezaka ny hiverina any amin'ny tranon'ny Etazonia sy ny Antenimieran-doholona izy saingy very tamin'ny tantara hatramin'ny 1875 raha voafidy tany amin'ny Antenimieran-doholona izy. Maty izy taoriana kelin'ny nandefasany birao ny 31 Jolay 1875 tamin'ny kôlerà.
Ny filoham-pirenen'i Johnson dia feno fifandirana sy fifandirana. Tsy nanaiky ny maro tamin'ny fanarenana izy. Araka ny hita amin'ny fanonganam-panjakana nataony sy ny fifidianana akaiky izay nanaisotra azy tamin'ny asany, dia tsy nohajaina izy ary tsy niraharaha ny fomba fijeriny ny fanarenana. Nandritra ny fotoanany tao amin'ny birao, ny fanitsiana fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo dia nomena ny andevo ary nanitatra ny zon'ny andevo.
10 Zava-mahaliana sy manan-danja momba an'i William Henry Harrison
10 Zavatra Hahafantarana an'i Andrew Jackson
Tatitra haingana: Filoha 41-44
Filatsiam-bola sy fanonerana
Martin Van Buren - Filoham-pirenena fahavalon'i Etazonia
Nifidy ny filoham-pirenena tsy nahazo fandresena
William Howard Taft Biographie: Filohan'ny 27 taona any Etazonia
Barack Obama - Filohan'ny Etazonia
The 6 Most Famous Presidential Fellowship
Filoha Amerikana Tsy Misy Politika
Ny Inside Scoop momba ny alahelon'ny rano
Moa ve ny Lobby Hobby Manakaiky ny Varotra 500+ Noho Ny Obamacare?
Fomba handikana ny fandehan'ny fotoana amin'ny teny Espaniôla
Mitazona ny finoanao kristiana rehefa hipoitra manerana anao izao tontolo izao
Ilay Canon Mahayana Sinoa Mahayana
Torolàlana ho an'ny fanampiana ara-bola ny sekolin'ny lalàna
Ny Matrix, ny Fivavahana, ary ny Filozofia
Ny fahasamihafana ara-pananan'ny Latino malaza
Connecticut College GPA, SAT sy ACT Data
Qué es el alien enregistré numéros y para que se utilizado
Conjugation of 'Creer'
Vehivavy sy ny Ady Lehibe Faharoa: Vehivavy Fankaherezana
A Glossary ny volavolan-dalàna momba ny tontolo iainana sy ny biolojika
Tetikasa momba ny tontolon'ny siansa: The Planet Mars
Marie de France, Grèce de Champagne
Tantaran'ny Festa della Repubblica Italiana
Toro-làlan'ny mpampiasa amin'ny Sport of Alpine Ski Racing
Ny tononkalo fanoherana sy ny revolisiona
Fanadihadiana an'izao tontolo izao
Fankalazana ny Paska an'i Md Jean Chrysostome
Famaritana ny fiheverana momba ny fiaraha-monina sy ny fanehoana ny boky
Toeram-piompiana - porofo ara-jeografika momba ny fitantanana afo
Escuchad el son triunfal ('Hark, the Herald Angels Sing' amin'ny teny espaniola)